DAAWO VIDEO:Dowlada Faderalka oo Ceebaysay Soomaliland Markabkii Xolaha Cadeymo Inay Dowlada Faderalka Fasaxday – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Dowlada Faderalka oo Ceebaysay Soomaliland Markabkii Xolaha Cadeymo Inay Dowlada Faderalka Fasaxday
July 19, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 14
Dhawaan Waxaa Dood Badan ka Dhalatay markabkii Dowlada Sucuudiga Diidey Warqad Dowlada Faderalka La’aantiisa In Dib Loo Celinayo,waxayna Soomaliland Sheegatay Inay wada Hadal Kusii Daayeen In markabkaasi Xoolaha Laga Dejiyo.
Dowlada Faderalka Soomaaliya Ayaa Warka Soo Saartay Markab Kaasi Waxayna Sheegtey Qaabka Markab kaasi Loogu Guulaystey In laga Dejiyo Xolahii Kadib Wada Hadalo Dhex Maray Dowlada Soomaaliya Iyo Dowlada Sucuudiga.
Raysal Wasaare Kuxigeenka Dowlada Soomaaliya Ayaa Sheegay Qaabka Loogu Guulaystey Inay Dowlada Fasaxdo markabkaasi Xoolaha Wadey.
DAAWO+XOG:Puntland oo Mamnuucday Dowlada Soomaaliya Cid Ka Socota Garoowe tagaan,Masuulin la Xidhay
Maxan idinlahaa iminkay oran donan
waxay geed dher iyo mid gabanba
ufulen inaan xoolaha laga rogin
xataa intii muranku socday waxa
ku dhintay 500 neef oo khanka house
Alxamdulilah sacuudigu fiidkii xalay ayuu garowsaday khaladka
waxanu sirasmi ah ufasaxay xoolihii
berbera shuruda kaliya oo uu ku
xiray waa in labaaro markay jida
isla xslay saqdi dhexe waxa berbera
ka shiraacday markab sida 50.0000
Waji gabax baa karaacay farmaajo
Ganacsade aljaabiri libax libaax dhalay waa ninka farmaajo iyo
xertiisi wado cad kuridey.
FARMAAJO OO KU JABAY DAGALKI GANACSIGA EE UU SOO QADAY
Maaamulka itaalka daran ee Xaarmaajo, markabkaa riyaha siday ceeb & fadeexad ayaa ka raacday.
Itaalkoodu waxa uu noqday Zoo malia ankaa ka danbaynay, haday wax ka danbeeyeen waxay ka danbeeyeen is hortaaga hore carabtu dantooda ayay raacayaan,waxayna sii kordhiyeen khilaafkii u dhexeeyay Somaliland & Zoo malia.
Waa la doodaa ee dadka bilaash loo ma xagxagto. Sidii aan dhowr goor kuugu bidhaamiyay waayahan dambe furkii baad tuurtay oo waad iska burqataa runtii. Dhiigkarka uun isla jir.
Anigu qoraalladaydii aan boggii aad igu maagtay ku soo tabiyay xoolo dhaqato iyo xoolahan aad la burqanaysaa walaa Sacuudiga midna kuma aanan soo hadal qaadin. Dad aan maciishaddooda wax ka sheegay mise u qoonsaday na ma jiraan oo iga ma suurowdo taasu Ahmedoow. Nabar kugu maqan oo aad meel kasta dadka kula dul xayraamayso uun weeye.
Anigu siyaasadda iyo danaheena guud ee qarannimo uun baan wax ka idhi oo Xaaji Saalax baanan doodda la waday. Armaay sharaftu kuugu jirtaa in aad is xasiliso oo aad si miyirsan u u dooddo
Waxay ahayd arrin wanaagsan oo ay DFS kudaryeelayso kuna badbaadinayso umadda reer waqooyi oo ay koox yar oo siyaasiyiin ku sheega oo ku sifoobay nacayb iyo cuqdad ay mel ku xirteen kana hor istaageen inay walaalahood wax la qabsadaan…Waqtigii dadka reer waqooyiga beenta iyo nacaybka loo sheegi jiray waa iska dhammaaday…
Dhowr goor oo hore ayaad adeegsatey weedhaha ah Albaabadii Caalamka ayaa la idinka soo xidhey. Shaleyna waxaad tidhi waa ta aad ka cabaadeysaan. Horta Albaabo lasoo xidhey ma jiraan. Tii dhaqaalaha iyo deeqaha Somaliland ee Ina Adeerkaa sida Cuqdadeysan uga faro marooji is yidhi waatii ay Beesha Caalamku ka diidey. Kanaaladii uu Xaarmaajo yidhi waan soo xidheyna waateynu ogeyn halkey ku danbeeyeen. Gini baan xidhiidhkii u jarney baa ka danbeysay. Kkkkk Ta imika taagan ee farxada iyo yididiilada ku gelisay waa taa Xoolaha Sucuudiga. Hadaad damiir leedahay waad ka dhiidhiyi laheyd. Soomaali walba oo wax garad ahi arintaas wuu dhaleeceeyay oo waa khalad in dadka masaakiinta ah ee Soomaaloo dhan leh ee xoolo dhaqatada dhaawac dhaqaale lasoo gaadhsiiyaa ayay yidhaahdeen. Xitaa Mucaaradka Somaliland ee gaamurey qaar ka mid ah ayaa arintaas dhaleeceeyay oo sax ma’ahan yidhi. Garaadkaad noogu faani jirtey xaguu ka dhacey? Instead farxad baa kaa muuqatey iyo reynreyn. Dadku ma dad caqliga ka madhanbaa? Arinta maanta taagani waa tan Xoolaha. Adna halkaad sida dadka dareenka iyo damaqa leh u jidh afba diidi laheyd ayaad u riyaaqdey. Xitaa Sucuudigii ayaa markuu arkey inaaney amarka Xaarmaajo soconeyn, Somaliland aheyn Hirshabeele iyo Koonfur Galbeed ka diidey markii danbe. Waa kuwaas Markey jabeen social mediaha soo istaagey. Anagaa fasaxney. Oo maxey warqada u keeneen kolkii horeba? Maxey Wasiirkoodii Xanaanada Xoolaha ugu direen Sucuudiga si uu amarkoodu u socdo? Dawladii Facebuuga iyo Social Mediaha. Kkkkk
Xaarmaajo cadowtinimadiisa wax walbaaba wey ka suurtowdaa. Tani hadey hirgasho waxa ku xigi laheyd inaanu Markab aanan ogolaanshiiyo ka heysan Xamar Berbera ka degi Karin. Imika wuxuu nagala dagaalamayaa meceeshadaan iibgeyno. Berinta waa ta aan soo iibsano. Adna eesh calaa masuultaasaad heysaa oo waad u sacabo tumeysaa. Kkkk
Xaarmaajo haduu gelin lahaa Soomaaliya amaba Muqdisho juhdiguu geliyay Somaliland waxbuu kasoo saari lahaa. Wax sidan dhaanta. Sanad iyo dhowr biloodbaa u hadhey. Haduu Eebbe idmo wuu iska huleeli iyadoon Soomaaliya holceyn. Laakiinse wuxuu huleeli iyadoo oo uu God dheer ku Ridey.
Walee Xaarmaajo iyo xaarwalwaaladiisu wey jabeen maanta. Kuye anagaa fasaxney oo u dagaal tagney. Kkkkkkkkkkkkkkk
Qosolkii aduunka iga dheh. Kkkkkkkkkkk
Kolkii horeba wey ogaayeen in aynu odhaneyno cirka u taleedhsha. Kkk. Waxeyse islahaayeen kolkuu Sucuudigu diido ayay iska aamusi. Malaha meyba fileyn in tani sumcad daro usoo jiidi doonto oo Aduunkoo dhami odhan doonaan saqajaamiin maceeshadii dagaalka geliyay ayaa tihiine Siyaasada ku dagaalama.
Aduunka waxa ugu liita dadka quudka iyo arsaaqada Illaahay kuu qorey kaala dagaalama.
Waxaan hubaa in damiir laawayaashaasi ay Farxad iyo Reynreyn u noqon laheyd hadey Xooluhu sidaas kaga xidhmaan Somaliland. Cidii ay dhibtu soo gaadheysona aaney sameeyeen. Guul ayay tirsan lahaayeen.
Weyse jabeen. Siyaasad xumadii damiir xumi ayay ku darsadeen.
SIYAAD BARE WAXA LAGU XUSUUSTAA MADAXWEYNIHII CIIDAMADII SOOMAALIYEED U ADEEGSADEY IN UU KU LAAYO DADKIISII SOOMAALIYEED KUNA BURBURIYO MAGAALOOYINKIISII SOOMAALIYEED.
FARMAAJONA WAXA LAGU XUSUUSAN DOONAA MADAXWEYNIHII ITAALKA YARAA EE QUUDKII IYO ARSAQII UU ALLE U QOREY DADKIISII SOOMAALIYEED KALA DAGAALAMAY OO AFKA QABO IS YIDHI. SI XUNSE UGU DHACEY.
Sida aad doonto ii nab oo igu been abuuro haddii aad kaga bogsanayso kaarka iyo xanuunka naceybka Daarood ee aad la kardhanayso. Sida aad qalbigayga daalacato ayaad u hadashaa ee hore ayaan kaaga digay in aad taxadar weyn ka gasho cilmul qeybka aad kol ba meel kaga dhacdo inta aad isleedahay Cismaan ku ciil bax ama ku xumee.
Abid wax hadal ah kama aanan dhiibanin masaladan xoolaha iyo Sacuudiga ee nabarka xun kugu noqday. Haddii aad hayso se nala wadaag oo soo daliisho. Isku na sii qanci khayaalka aad runta isu moodsiisay oo nafta ku sasab laakiin waaqiciga dhabta ah waxba ka baddali mayso iyo in aad tahay muwaaddiin si rasmi ah uga tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya. “Somaliland” dal la yidhaahdaa koonka kama jiro oo adigu na waad ogtahay.
ASC dhmaan Somalida cafimaadka qabta dhamaan, dr cawad wallkeey salaamullahi caleeykum sigaara adiga iyo ehlkeena somaliyeed ee wanaaga jecelba intaa kadib.
Madaxweeyne Farmaajo madaxiisa Allaha raajiyo iyo weliba dowladeena iyo madaxdeena qiimaha leh oo wanaaga iyo karaamda mudan waad maqleeysaan RW kuxigeenka sharfta iyo caafimaadka usaabika ah waxa uu yiri dadaal dheer kadib waan ku guuleeysanay siideeynta xoolihii markabkii dadka somaliyeed ee North Somalia kasocday hadee waa Alle mahadii dowlada Farmaajo maahan ciyaal suuq cunaqabateena kama suurtoowdo ee dhibka waxaa waday waa Saudi Arabia lkn Alxamdlillah madaxdeena Allaha barakeeyo aammin Ayaan leenahay
reerkaan indha adeega cuskanaaya waxaan leeyahay Alle kabaqa oo is dejiya enough is enough. Intaas miyeesan idiku filneeyn dambi iyo xasarad, RAJO AAN JIRIN soo kama eeydan daalin ilaa aad DABBAAL DEGTAAN oday muuse oo lasoo dhoweeyay INNAA LILLAHI WA INNA ILEEHI RAAJICUUN.
Her Royal Highness Princess Gabar Harti,
Walaasheen qaali waan kaa qaaday salaantaada Islaamka ee qiimaha iyo qaayaha leh oo waxaan hawada kuu soo marinayaa isla iyada oo kun facood ah. Waxaan idiin rajeynayaa caafimaad, bashbash iyo barwaaqo taam ah.
Ina boqoreey mujciso xun baa wallaahi Soomaalida badankeeda ku habsatay oo belo ayaa is nacsiisay oo uriso isu saartay. Waa duni aakhir zamaan oo inteenaa fara-ku-tiriska ah ee meel walba ugu xiiqay in ay Soomaalidu is walaaleysato aynu noqonnay tuke cambaar leh oo dhan walba laga soo shiidayo.
Waynaan arag oo maqal boqoraddaay!
Xaaji saalax Soomaalidiid, reer Muuse Khayre sheegte.
Suuq madoow iyo xarraas habeenimo.
War Jamhuuriyadii ma halkaasay ku danbeysay? Xaaji saalaxoow waxaa la yiri shaydaanku habeenkii buu meel wadoow wax ku falkiyaa, iminkana shaqdiisii ayaad ka bilowdeen Berbera habeenkii oo saqda dhexe ayaad si suuqmadow ah habeenkii xoolaha laashahs ugula carartaan, balse dawlada dhexe way indho dheer tahay oo daqiidad daqiiqad bay wax walba ula socotaa.
Tan kale ninyohow adigu berigii hore waxaad nagu oran jirtay axaan ahay nin Reer Xaaji Muuse Kahyre ah, balse maanta waad la waalatay tale xumayaasha ay ka mid yihiin muuse biixi iyagooba aan cad qudhun ahna aan kuu ogolayn. wax aad ka wayday Soomali weyn ma dheefsanaysaa inay kaaga soo harto nimankan cirka wayn ee iidoor.
Ninkii Soomaaliyeed ee reer xaaji Muuse khayre, ee wariye maxamed waji 40 sanadood maanta aya isku xishoodeen oo agaasime aan lacag saa usii buurnayn qaadan laga dhigay. maxaa loo cunsuriyeeyey? wuxuu yiri kuwaan anigu shaqada baray baa wasiira ah, isagu wasiir ma noqon doonaa xitaa cusbo meesha haka noqdee.
Baasaboor meesha aad diiday baa laga soo saaraa, anigu waxaan kugula talinayaa boostaha lama soo dhigee, sida ugu dhakhsaha badan u doono waayo reer geesahoodii iyo heeryadoodii wata ayaa soo guuxaya oo kolka la fasao waad ogtahay inay wuxuu isku wada maskax yihiin oo meel u wada yaacayaan.
Munaafaqiinta gaamuray ee halkan iskugu jiibinaya waxaan leeyahay waxba ilmada yaxaaska ha’iskaga keenina. Munaafaqnimadiina waa la arkaa. Qofkii fayowi wuu dheehan karaa waxa aad u taagan tihiin inuu khalad yahay.
Munaafaqiinyahay maxaydin uga dhiidhiyi weydeen intuu xurguftu socotey hadaan damiir leedihiin? Waa su’aal aad iyo aad u muhiim ah.
Munaafiqiinyahay maxeydin uga damqan weydeen oo uga hadli weydeen markii xaajadu murugsaneyd ee uu ka hadalkeedu joogey?
Munaafeqeenyahay mexeydin u muujin weydeen dareenkiina iyo fikirkiina ku saabsan Dawlada Xaarmaajo ee usoo dhigatay iney illaa iyo xitaa maceeshadii kala dagaalanto Somaliland?
Horta ma’is weydiiseen cida uu dhaawacu soo gaadhayo. Ma Baayac Mushteribaa? Maa Dawlada Somaliland baa? Ma dadka masaakiinta ah ee shicibka ah ee qolo walba lehbaa, Dir iyo Daaroodba?
Haduu Baayac Mushteri noqdo khasaare badani soo gaadhi maayo waayo waxey ku jiraan ceymis ama insurance oo dakhligooda waa loo gudayaa. Hadey Dawlada noqotana iyadu xuduudaheeda ayay xidhaneysaa oo lacagtii neefwalba Berbera laga qaadi jiray ayay qaadaneysaa xuduud walba oo ay xooluhu ka baxaan. Shicibka xitaa Somaliland ka baxsan ee leh Dawlad Degaanka Somali Galbeed ama Ogaadeeniya ayaa waxyeelada ugu badani soo gaadheysaa. Waayo iyaga ayaa waayaya shilimaadkii yaraa ee kasoo geli jirey neefafka ay iibgeeyaan xiliga Xajka.
Intiina cuqdada Isaaqnimo iyo neceybka Somaliland dhaansadey miyeydaan damiir laheyn? Sidaan anigu isleeyahay ma lihidiin damiir idinku filan oo aad ku kala shaandheyn kartaan siyaasada iyo danaha dabiiciga ah ee khuseysa nolosha aasaasiga ah ee Soomaalinimo.
Fariinta aan idin siinayaa waa ORDA OO IS AASA CAWAANYAHAY AANAN BIYAHA IS MARININ.